Mazava ho azy fa tsy ho avy tany amin’ny lanonana famoahana amin’ny fomba vonjimaika ny valim-pifidianana tetsy amin’ny CENI Alarobia omaly ny kandida ho filoham-pirenena laharana faha 25, Marc Ravalomanana. Ny fahatongavany teny dia marika fa mankato ny hosoka sy ny halatra ny tenany, hoy ny fanehoan-kevitr’ireo mpanaradia azy.
Ny kandida laharana faha 13, Andry Rajoelina, izany no filoham-pirenena Malagasy vonjimaika, raha ny voka-pifidianana navoakan’ny CENI Tetsy Alarobia omaly. Ny fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana na HCC kosa no tompon’ny teny farany amin’ny fanapahana izay tena ho filoham-pirenena Malagasy ofisialy.
Mandeha sahady amin’izao fotoana izao ny karazana antsojay mianjady amin’ireo gazety sy mpanao gazety sahy milaza ny marina momba ny hoso-pifidianana ho filoham-pirenena. Maro ireo efa nitaraina fa niharana fampihorohoroana na dia mbola tsy nahazo fitondrana akory azan y filoham-pirenena Malagasy vonjimaika.